Good Brothers' Co., Ltd မှ Asst. Manager (Salin Branch) Urgent Position | MyJobs
/ Asst. Manager (Salin Branch) Urgent Position
Asst. Manager (Salin Branch) Urgent Position
(Salin−Microfinancing) အတွက် လက်ထောက်မန်နေဂျာ အမြန်အလိုရှိသည်။
Job Purpose (ရည်ရွယ်ချက်)
သိရှိရန် ၊ လုပ်ငန်း၏ရေရှည် လုပ်ဆောင်ရမည့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို
Duties and Responsibilities (တာဝန်နှင့်
Brothers Co., Ltd ၏တာဝန်ရှိသူနှင့်
၂။ MFI အတွက် မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအသစ်များ၊ အဟောင်းများသို့ Survey
& Marketing ဆင်းရန်၊
၃။ Village Calendar ဖြည့်ခြင်း၊ Client
Interview Form ဖြည့်ခြင်းအား
၄။ ကုမ္ပဏီအတွက် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်သင့်သော မြို့နယ်၊ ကျေးရွာများအားတင်ပြရန်၊
၅။ လုပ်ငန်းအတွက် လိုအပ်သော အထောက်အထားများခိုင်မာပြည့်စုံရန်ပြင်ဆင်ပေးရန်၊
၇။ Good Brothers
Co., Ltd ရှိ အခြားဌာနများနှင့် (ကုမ္ပဏီခွဲ) ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊
၈။ ကုမ္ပဏီအတွင်းလစဉ်၊ အပတ်စဉ်အစည်းအဝေးများတက်ရောက်ရန်၊
၉။ အခက်အခဲများကို ဝန်ထမ်းများဖြင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်၊ ဖြေရှင်းရန်၊
၁၁။ GBS ၏လုပ်ငန်းစဉ်အားပြည့်စုံစွာရှင်းလင်းဆွေးနွေးရန်၊